शब्दकोश: हामी के लेखिरहेछौँ ?
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, February 11, 2010
वसन्त बलामी February 12, 2010
एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भो धाइबा जी । लेख्नेहरूले के को निम्ति लेखिरहेछन् ? अनि के लेखिनुपर्छ ? यिनमा पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
Dilip Acharya February 13, 2010
झलक सुवेदीको माथि उल्लेखीत लेख पढ्दा मेरो मनमा पनि केही कुराहरु उठेका थिएँ।
'खुल्ला बजार' र मिडीयामा के लेखिन्छन, कसले पढछन र त्यसका तत्काल र दूरगामी के कस्ता प्रभाव रहन्छन भन्नेमा भने जुनसुकै स्थान वा मिडीमामा लेख्नेले पनि इमानदारीका साथ सोच्नु भने पक्कै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ।
हैन भने त तपाइले नै लेख्नु भएजस्तै पत्रिकाको लागि'रिक्त स्थान पुरयेत' र लेख्नेहरुलाई 'खल्ती गरम कार्जे' मात्रै चलिरहनेछन ।